Global Voices teny Malagasy · 25 Jolay 2018
25 Jolay 2018
Oktobra 2021 39 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 25 Jolay 2018
Azia Atsinanana25 Jolay 2018
Afrika Mainty25 Jolay 2018
Ejipta: Manabaribary Ny Herisetra Miseho Mandritra Ny Black Out-n'ny Haino Aman-jery Ny Mediam-Bahoaka (Sary Mahery Setra)
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana25 Jolay 2018
Nandritra ireo dimy andro nahatapahan'ny haino aman-jery sy ny fifaneraserana tao Ejipta, vitan' ireo mpikatroka ny namadika ilay sivana ary namoaka lahatsary naharitra ora maro, naharakitra ny herisetra niseho nandritra ilay ''revolisiona'' izany, lavitra ireo sehatra milamina amin'ny fifamoivoizana tsotra ao afovoan'i Kairo sy ny làlana tsy misy olona izay...
Global Voices Miara-miasa amin'ny Magdalene, ilay gazetiboky feminista an-tambajotran'i Indoezia
Mediam-bahoaka25 Jolay 2018
''Voninahitra ho an'ny Global Voices ny manambra ny fiarahany miasa amin'ilay gazetiboky feminista an-tambajotra an'i Indonezia, Magdalene.''
Koety: Nankalaza ny faha 29 taonany ny tilikambo
Nanamarika ny faha-29 taonany tsy nisy fankalazana firy ny Tilikambon'i Koety, vakoka lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Saingy tsy nanadino an'io fotoana io ny bilaogera iray araka ny nosoratan'i Abdullatif Al Omar izay mitondra antiksa ihany koa any amin'ny fihaonan'ny bilaogera... sy mizara amintsika ny zavatra hita tany amin'ny tranon-tsinema.
India, Sri Lanka: Fetiben'ny Tempoly tany amin'ny andaniny sy ankilan'ny andilan-dranomasin'i Palk
Azia Atsimo25 Jolay 2018
Ampahany manan-danja amin'ny fiainan'ny Tamòla haindò, manerana ny firenena izay honenan'izy ireo ny fetiben'ny tempoly. Ity tatitra an-tsary manaraka ity dia ahitana ny fotoana vitsivitsy tamin'ireo fetibe ireo.
Mitondra antsika hitety ny tranombarikan'i Dhaka (na ny ambany tanàna araka ny fiteny hafa) ny ekipam-bilaogeran'ny Nari Jibon, mamariparitra ny fiainan'ny Bangladeshita monina amin'ny faritra mahantra indrindra amin'ny renivohitra. Noho ny fandehanan'ny dikantsoratra haingana dia haingana, dia afindrako eto izany soratra izany.
Shaghayegh Azimi no fehin'izay lazaina matetika ato amin'ny Global Voices ho "bridge-blogger" [bilaogera-tetezana fampitana]; olona mampiasa ny bilaoginy mampita na mampifandray kolontsaina roa na maro. Fa misy zavatra iray voamarika - tsy tena bilaogera i Azimi. Amin'ny maha-mpamokatra filma taloha azy tao Iran, ny lahatsary hatrany no nosafidianany ho fitaovam-panehoan-kevitra.
[Lahatsary] Sombin-tsarin'ny Iran Inside Out
Atolotr'i Shaghayegh Azimi amintsika izay heverina fa hivoaka amin'ny Iran Inside Out, tetikasa eny an-kianja miara-miasa amin'ny videobilaogera iraniana ao an-toerana mba hamantarana izay tanora mpanatontosa sarimihetsika misandratra sy mampianatra azy ireo ny fomba izarana ny asany an-tserasera.
[Lahatsary] Dominika, ankizy eny an-dalambe
Namokatra ity horonantsary fanadihadiana an'i Dominika, mpangataka eny an-dalambe ao Antananarivo ilay bilaogera ao amin'ny FOKO sady mpikambana Klioban'ny amin'ny Firenena Mikambana antsoina hoe Nombana. Nalefa tao amin'ny MySpace tamin'ny fifaninanana Alaivo horonantsary ny Lohahevitrao ( Film Your Issue) ny lahatsary.